कलियुगका कुरा: May 2010
लउन म्याद बढाओ
माने यार दलहर्लाई र तिन्का नेताहरुलाई!
पहिले पहिले संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइदैन भनेर जनताले नारा लाउँथे। अब लउन जसरी भए नि म्याद बढाइदेउ भनेर हाम्ले भन्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइदिए। अब भोलिपर्सी 'हाम्लाई त संविधानसभा चाहिन्न भनेकै थिएम्नी तिम्हरुले गर्दा मात्र बढाएको; बेलामा संविधान दिएनम् भनेर नकाराओ है फेरि भंग गर्दिम्ला' भनेर घुर्की लाउने होलान्..सकिएन बा तिम्हरुसँग..।
अस्ति नै संविधानसभाको म्याद थप्ने भए भत्ता लिन पाइन्न भनियाथ्यो। अब कता डबल भत्ता दिन्नौ भने त बिताउन्नौं सविधानसभा भन्लान् र हाम्ले फेरि देश युद्धाँ जान भन्दा त बरु लउ लउ तेब्बर लिए नि लिओ संविधानसभा बचाइ चाहिँ राख्देउ भन्न पर्ने होलान्।
Rule of Law No no 'Hull' of law
जेठ १४ सम्म नि संविधानसभाको म्याद नथपिए कसो होला श्रीमान् भनेर एक जना न्यायाधिसलाई सोधेको। गज्जप उत्तर दिए। 'रुल अफ ल' भए पो यसो हुन्छ भनेर मैले भन्नु। 'हुल (भिड) अफ ल' छ। हुलले जे जे गर्छ त्यही हुन्छ...
मैले भनेको माने पो। थोरै बोल भन्छु मान्दैनौ
यीऽऽ हाड नभाको जिब्रो त चिप्लेछ नि प्रधानमन्त्री माधव काम्रेडको 'संविधानसभा माउवादीलाई चित्त बुझाउन मात्र मान्देको हो। अन्य तरिकाले नि संविधान बनाउन सकिन्थ्यो'भन्देछन्। माउवादीलाई चित्त बुझाउन संविधानसभा मान्दिनेले अब फेरि तिन्लाई चित्त बुझाउन राजिनामा नि दिए भैगो भन्लान् केही वुद्धिजिवीले। माउवादीले फेरि मसला पाए 'देख्यौ!यो सर्कारले संविधान बनाउँदैन' भन्न।
नाम युनिकै बेस
यो संयोग भन्ने कुरा पनि अचम्मैको रैछ। आफू साझा सवालको रेकर्डिङ गर्न पोखरा गइयाथ्यो तीन दिन्लाई। फेसबुक चलाइएन। कतिले त वारेन्ट जारी गरिएको युनिटीको दीपक भट्टराई तँ नै होस् कि के हो भनेर हैरान पारे। सस्तो मस्तो जल्ले पायो तेल्ले राख्ने नाम राख्न पनि गतिलो काम होइन रच। नाम युनिक नै बेस...
रगत मागो देशले
देशले रगत मागे जस्तो छ। बाबुराम भट्टराईले नेपाली पत्रिका नागरिक र कृष्णबहादुर महराले अन्तराष्ट्रिय पत्रिका फाइनान्सल टाइम्साँ फेरि जंगल जाने धम्की के दियाथे। महिनौं पछि आज हात काटेर रगत गो नि ट्वाइलेटको छेस्किनीले...
May 17 at 4:40pm ·
चन्दा नि दिइन्छ, ट्याक्स नि तिरिन्छ
व्यापारीहर्ले दलहर्लाई मिल्न देको अल्टिमेटम सकिएसी एक जोक याद आयो। बुढोले नुहाउन तातो पानी तताउन भनेछ बुढीलाई। बुढीले तताउन नमानेपछि छिटो तता नत्र नत्र भन्दै गएछ। बुढीले अति भर नत्र के भन्दा बुढाले चिसै पानीले नुहाउँछु भन्थ्योरे। व्यापारीले अल्टिमेटमको दिन बढाउँदै लाँदा नि सहमति भएन। अब यिन्ले लास्टाँ सहमति नगरे पनि चन्दा नि दिइन्छ ट्याक्स नि तिरन्छ भन्लान जस्तो लाओ। यिन्को नत्र..पनि फासाफुसु हुन्छ जस्तो छ।
लउ मेरो नि युनिटीआँ नाम...
ग्रह ठूलै लाको जस्तो छ। कहाँ न महाँ युनिटीलाईफले चलाउने अनलाइन पत्रिकाको सल्लाहकाराँ मेरो जस्तै नाम छ त बा... http://www.unityonlinenews.com/?action=aboutus मसँग यो अनलाइनको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। बरु हार्न नसकेर चार/पाँच वर्ष पहिले एक साथीले १३ हजार जति रुप्पै लग्याथे। के के भो पत्तो छैन।
प्रधानमन्त्रीको लागि रमाइलो
माउवादी र एमाले दुबै प्रधानमन्त्रीआँ असफल भएको भन्दै केही काँग्रेसका नेताहर्ले अब प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पार्टीलाई चाहिने भन्दैआछन्। माउवादी र एमाले मिलेर 'हुन्छ प्रधानमन्त्रीको नाम देउ भन्दिन पर्छ'काँग्रेसाँ फेरि रमाइलो हुन्छ। माउवादीआँ त्यही प्रधानमन्त्रीका लागि रमाइलो भइराछ। आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि प्रचण्डले बाबुरामलाई नि नदिएर बरु महरालाई दिने भाछन रे।
एकजना सभासदलाई डेढ अर्ब रुप्पै खर्च गरिएछन नि संविधानसभा गठन भएसी। अबत तलब लिइन्न होला नि म्याद थप भएमा भनेको त क्वाप्पै खाएनी-मुला शान्ति र लोकतन्त्रको मुल्य खोज्ने?माउवादी हिसाका बेला ७ अर्बको भौतिक संरचना ध्वस्त भाथे। त्यस्को पनि हिसाब गर। हाम्ले संविधान बनाएनम् भने भोलि झन् खर्बौ ध्वस्त हुन सक्छ। त्यस्को हेक्का राख भन्ने चेतावनी वा सो सरह पाइयो।
द्याट इज ग्रेट
द्याट इज ग्रेट भन्ने थेगो हुने रैछ यार कसै कसैको। यसो च्याटमा बसेर केही भन्यो कि द्याट इज‌ ग्रेट भन्छन्। जे भने नी। एउटा विदेशाँ भाको साथीलाई रिस उठेर तेरो बुढी पोइला गई भनेको त झन् ओउ द्याट इज मोर ग्रेट भन्छ बा...
रातिमा तात्ने कुरा गर्ने ?
चाहिने कुराँ 'सेन्सेटिभ' हुनु छैन,नचाहिने कुराँ 'सेन्सेटिभ' यार मान्छेहरु नि।'जब भयो राति तब बुढी ताती'भन्ने उखान प्रयोग गरेको त एक सहकर्मी - रातिमा तात्ने 'भल्गर'उखान युज गर्ने" भनेर माफै पो मगाउलान् जस्तो गर्छन यार। कुरो र कुलो जता लगे नि हुन्छ भन्थे हाम्रा गाउँमा हो रच। (हास्नुपर्ने कुरा धेरै छन् हा हा हा...)
युनिटीले फिर्ता देला त...
साथीभाइलाई हार्न नसक्दा पनि बेकारको झन्झटमा परिने रैछ यार। युनिटी लाइफ अवैधानिक भन्दै एकातिर सम्चार अर्कातिर युनिटी राम्रो भन्दै त्यसैको विज्ञापन दिन दिनै छाप्या छापै छन् पत्रिकाले। आफसँगट नि एउटाले चार वर्ष जति पहिले १३ हजार रुप्पै लगाथ्यो युनिटीलाई भन्दै। के-कसो भा छ कुन्नि। साथी त वेपत्ता छ। कसैले पैसो फिर्ता पा भा भनम् है मलाई नि। म नि लाइनाँ बस्छु। यो खडेरी ला बेलाँ दशै हजार पाए नि धन्य हुन्थे...
क्यार्लान त माउवादीले
एक कुटनीतिज्ञले सुनाका-माउवादीको धेरै भर छैन रे। प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिए संविधानसभाको म्याद नथप्न पनि सक्छ रे। अनि भोलिपर्सी संविधानसभा पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्छ रे।'बा हो कि अस्ति नै नि कसैले छोड् नभनी सरकार छोड्याथे। अहिले त्यही चाहियो भन्दै दिनहुँ घुर्की-धम्की दिराछन्। आन्दोलन गरिरहने बाहना पनि चाहियो नि। तेत्रा कार्यकर्ता छन्, विचराहर्लाई अलमल्याउने अरु उपाय कसैले सुझाछैन।
मैलो धैलो-सुकिलो हुन खोजेर
आफू मैलो-धैलोआँ सडकमै हिड्न पर्ने मान्छे प्रचण्डले भनेसी जब्बरजस्ति सुकिलो मुकिलो बन्न खोजेर कहाँ हुदोरहेछ र। पाए माइक्रोबस नपाए टेम्पो नत्र स्वयमभूत खाल्को बसाँ ठेलम ठेलम गरेर चढेर अफिस आइपुग्दासम्म सेतो सर्ट त पुरै कालो भइसक्छ। कालो जुत्ता लाओ भने त पुरै खैरो भइसक्छ। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
घराँ आउने पत्रिकाका लेखहरु पढेसी बाउलाई लागेछ साला यतिको लेख त म नि लेख्छु। बुढाले टाइप गर्न जान्दैनन्। बाउको लेख टाइप गर्दै पत्रिका कार्यालयाँ इमेल गरेर सेवा गरिराछु मैले त। धन्न पत्रिकाहर्ले लेख/रचना भन्दा पाठक पत्रलाई धेरै स्थान दियाछन् र छाप्पिराछन्। उहिले श्रवणकुमारले बा-आमालाई बोकेर तिर्थ गर्याथेरे। आफ चाहिँ बाउको पाठक पत्र टाइप गरेरै आधुनिक श्रवणकुमार बनियाछ, के गर्ने अरु केही गर्न सकिएन त आमा-बाउका लागि...
छोड्दैनन कि क्या हो काम्रेडले
माउवादीले आमहडताल फिर्ता लिने र माधव काम्रेडले सरकार छोड्ने भन्ने सुनियाथ्यो,हन रछ कि क्या हो। काम्रेड त सेना समायोजनपछि मात्र छोड्ने भन्छन्। भोलिपर्सी वाइसिएल विघटन,घरजग्गा फिर्ता,नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण भन्ने सर्त राख्दै,मैले नियुक्त गरेका मेरा भाइलाई फिर्ता बोलाउन पाइन्न,म फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने शर्त पुरा हुने भए मात्र सरकार छोड्छु'भन्लान। आफ्लाई त छोडे पो के बसे पो के...
सञ्चारकर्मीले आफ्नै हाकिम कुटेछन्।
ई!सञ्चारकर्मीहरु पनि लोपोन्मुख जातिमा पर्लान जस्तो छ। अरुले त निसाना साँधेर कुट्याथे कुट्याथे। आफूहरु पनि एक अर्कासँग भिड्न थालेछन्। बागेश्वरी एफएम नेपालगन्जका स्टेसन म्यानेजर नवीन गिरीलाई कार्यक्रम सञ्चालक समीर श्रेष्ठले गोदेछन्। अफिसको कम्पुटर घरको काम प्रयोग नगर भन्याथेर टेलिफोनले बजाइ दिएछन्। सानमा 'बल भन्दा बुद्धि ठूलो' भन्ने बादबिवादमा विपक्षमा बोल्याथे होलान्।
फेरि अर्का मन्त्रीले कुटेछन्
मैले त्यस्सै हो र सरकारी जागिर नखाको। सिडिओ कुट्ने मुन्तरी करिमा वेगम र सचिव मदनकुमार भट्टराई कुट्ने श्रममन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई धन्यवाद है। सँधै सरकारी जागिर खान नसक्ने लाछी भन्नेहरुलाई गज्जप जवाफ दिइयो आज। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
अलकति भोट ल्याएर काठमाडौंमा ठूलो घर भाडाँ लिएर ठूलो गाडी चढेर हिड्दैमा नेपाली जनतालाई,उनीहरुको शान्तिको आकाक्षालाई हेपेर तिमीहरु धम्कीपूर्ण भाषामा बोल्दै हिड्छौ र पटक पटक हतियारको दम्भ देखाउँछौ भने त्यसको एक एक हिसाब नेपाली जनताले लेखेर राखेर बसेका छन्। कोकोले के के बोले। कसरी कसरी धम्की दिए भन्ने कुरा लेख्न जान्नेले डायरीमा लेखेर नजान्नेले दिमागको डायरीमा लेखेका छन्। तिन सबैको हिसाब किताब यथादिनमा नेपाली जनताले दिनेछन्। दिपक भट्टराईको फेसबुक कमेन्ट भनेर लेख्न पनि नमिल्ने....(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन्...)
'अलिकति कमाएर काठमाडौंमा घर बनाएर (घडेरी किनेर घर बनाउन पर्खेर) बस्दैमा नेपाली जनतालाई,उनीहरुको शान्तिको आकाक्षालाई हेपेर तिमीहरु लेख्छौ र बोल्छौ भने त्यसको एक एक हिसाब नेपाली जनताले लेखेर राखेर बसेका छन्। कोकोले के के लेखे? कोकोले केले बोले?भन्ने कुरा नेपाली जनताले डायरीमा लेख्न नजाने पनि दिमागको डायरीमा लेखेर बसेका छन्'प्रचण्डको ।
कसै कसैले यो शहराँ गाडी मात्र भए पनि महिनामा ५/७ दिन चल्न नपाउने हडताल गर्दिए हुन्थ्यो नि। क्या मज्जाले नाक फुला'र हिड्न पाइयाथ्यो तीन चार दिन। पानीले भिजेको धुलो आज घामले सुकायो अनि गाडीले उडाएसी आजट फेरि नाकाँ लँगौटी बाँधेरे हिड्न परिराछ...
आन्दोलन फिर्ता लिएसी
माउवादीले आन्दोलन फिर्ता लिएसी एकजना पधानमन्त्रीका सल्लाहकारलारलाई बधाई देको धन्न कुटेन नि फोनाँ - मुला मेरो जागिर जाने बेला भो तलाई हर्ष छ भन्दै.....(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
अझै संविधानको दिनगन्ती
बिहान रेडियो सुनम कि पत्रिका पढम। दिउस टिभी हेरे पनि अझै संविधान घोषणा हुने दिन यति उति भनेर गनिर'का छन । आज पनि नयाँ संविधान बन्न 21 दिन बाँकी भनेर रेडियाले भनिराथे। यिनहरु बेलाँ संविधान बन्ला भन्ने आशामा होलान कि दबाब देका होलान...(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
आन्दोलन गर्न फ्रिमा अम्रिका जाने?
सडकआँ हिड्दै गर्दा अलिक राम्रा कपडा लाका दुई जनाले कुरा गरेको सुनेको। एउटाले भन्यो- यिनहर्लाई आन्दोलनमा जब्बरजस्ति ल्याइएको हो। अर्काले प्रतिवाद गर्यो-मुला तँलाई विरोध गर्न फ्रिमा अमेरिका जाम केही दिन खाने बस्ने व्यवस्था पनि छ भन्यो भने जान्छस् कि जान्नस्? कि जब्बरजस्ति लान पर्छ। सुकिलो नम्बर एक त ट्वाँ (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
जन-आन्दोलन,त सुरुमा(fun नाचगान )आन्दोलन भइराथ्यो। हिजोट गन (Gun भक्तपुरमा क्या त)आन्दोलन भयो। आजट चाहिँ रन(रण मैदानमा जस्तो प्रतिकार/सर्तिकार)आन्दोलन भो। अब भोलिट डन(Don गुण्डाहर्को)आन्दोलन हुने होला देशाँ। घराँ चाहिँ साथाँ पैसा नभर धन-आन्दोलन छ,यो बढ्दै गर भोलिट बुढाबुढीबीच मन-आन्दोलनल हुने हो कि..जीउमा तन आन्दोलन त अस्तिनै देखि छ..
अब हानथाप हुने भयो। सरकारवादी दल र माओवादीबीच वार्ता गराउन के। अस्ति अस्तिसम्म मानवअधिकारकर्मी भनिने दमनाथ -पद्यरत्नले गर्थे। हिजोसम्म व्यापारीहरुले गरिराथे आजबाट पत्रकार र साहु पत्रकार अगाडि सरेछन्। तपाइको कुनै समूह छ भने वार्ता गराइहाल्नुहोस है कुनै फाइभस्टार होटलाँ नभए पछाडि परिएला....
मन्त्रीहरु त बिहानै अफिसाँ...
माउवादीहर्ले आज बिहानै सिंहदरबार घेर्ने भनेपछि हिजो अस्ति ६/७ बजे सिंहदरबार पुग्ने मन्त्रीहरु आज ४ बजे नै कार्यालय पुगेचन्। माउवादीको त भर छैन भोलिट ४ बजे बिहानैदेखि सिंहदरबार घेर्ने भने भने उतै ओछ्यान लार सुत्छन् होला मन्त्रीहर...
बन्दमा क्यार्ने त नि...
६। नजिकका साथी गए पनि हुन्छ। कति लामो समय भयो होला तपाइले चाहेर पनि एक घन्टा वरपरै बस्ने साथीकोमा पनि नगएको?
९। नजिकै हाइकिङ गए नि हुन्छ।